About Law & More B.V. | Dhijitari Mutemo Firm | Eindhoven uye Amsterdam
Law & More is a dynamic multidisciplinary Dutch law firm and tax taxory specializing in Dutch corporate, commercial and tax law and is based in Amsterdam and the Eindhoven Science Park - the Dutch "Silicon Valley" in The Netherlands. Iine yavo yeDutch yemubatanidzwa uye yemutero kumashure, Law & More inosanganisa kuziva-kweye yakakura kambani uye yemutero kuraira femu nekutarisira kune ruzivo uye yakasarudzika sevhisi yaungatarisira ye boutique firm. Isu tiri vemunyika dzepasirese maererano nehukuru uye hunhu hwemasevhisi edu uye tinoshandira ruzhinji rwevatengi veDutch uye vekunze vatengi, kubva kumakambani nemasangano kune vamwe vanhu.
Iyo Multidisciplinary Dutch Law Firm
Law & More is a dynamic multidisciplinary Dutch law firm and tax taxory specializing in Dutch corporate, commercial and tax law and is based in Amsterdam and the Eindhoven Science Park - the Dutch "Silicon Valley" in The Netherlands.
Iine Danish yekudyidzana uye yemitero kumashure, Law & More inosanganisa kuziva-kweye yakakura kambani uye yemutero kuraira femu nekutarisira kune ruzivo uye yakasarudzika sevhisi yaungatarisira ye boutique firm. Isu tiri vemunyika dzepasirese maererano nehukuru uye hunhu hwemasevhisi edu uye tinoshandira ruzhinji rwevatengi veDutch uye vekunze vatengi, kubva kumakambani nemasangano kune vamwe vanhu.
Law & More ine raramo yayo yakazvipira timu yevamiriri vemitauro yakawanda nevapi vemitero neruzivo rwakadzama mumunda weDutch chibvumirano chemutemo, danho remutemo reDutch, mutemo wemitero weDutch, mutemo wevashandi veDutch nemutemo wepfuma wepasi rese. Iyo fenicha zvakare inoshandira mutero-unobudirira kurongeka kwemidzi uye zviitiko, danho reDutch simba, Mutemo weDutch wemari uye kutengeserana kwezvivakwa.
Kunyangwe iwe uri mubatanidzwa wemarudzi akawanda, SME, bhizinesi rinobuda kana munhu akazvimirira, iwe uchaona kuti maitiro edu anoramba akafanana: kuzvipira kwakazara pakuwanikwa uye kuteerera kune zvaunoda, nguva dzese. Isu tinopa kudarika kungoita kwehunyanzvi hwepamutemo hwepamutemo - tinopa zvinyoro-nyoro, mhinduro dzakasiyana siyana nedhivhari yakasarudzika uye nzira.
Femu yemutemo muEindhoven uye Amsterdam
Law & More inopawo kugadziriswa kwepamutemo kwekupokana uye kuseta matanho kumakambani nevanhuwo zvavo. Inoitisa zvakanaka-kuongororwa mikana nemikana njodzi pamberi pese pamutemo maitiro. Inobatsira vatengi kubva kumatanho ekutanga kusvika padanho rekupedzisira redanho repamutemo, ichiisa basa rayo pane yakanyatsofungwa, zano repamberi. Iyo fenicha zvakare inoshanda segweta mumba-yemakambani akasiyana eDutch uye epasi rese.
Pamusoro peizvi, iyo feni ine hunyanzvi pakuita kutaurirana kwakaoma uye maitiro ekuyananisa muNetherlands. Chekupedzisira asi chisiri chidiki, isu tinopa vatengi vedu mune-kambani kosi yekudzidziswa, yakagadzirirwa kukwana zvinodiwa nevashandi vavo, pane akasiyana ematare zvinyorwa, izvo zvakakosha kune kambani iri mubvunzo.
Iwe unogamuchirwa kuti utarise webhusaiti yako, kwaunowana rumwe ruzivo nezve Law & More. Kana uchida kukurukura nezvenyaya yapamutemo yemutemo kana uine mubvunzo nezve masevhisi edu, ndapota usazeza kuwana mukana
Yedu firm inhengo yeLCS network ye magweta yakavakirwa muThe Hague, Brussels neValencia.
"Law & More akabata uye achichengeta rimwe divi richimanikidzwa ”
Yedu multidisciplinary nzira yekuDutch yezvemitemo, Gweta uye mutero kuraira mabasa ndeye anotonga, kutengesa pamwe nekuita. Isu tinogara tichitanga kupinda mukati mebhizimusi revatengi vedu uye zvido zvedu. Nekufungidzira zvavanoda ivo magweta edu anokwanisa kupa mabasa ehunyanzvi pamhando yepamusoro yepamusoro.
Kuzivikanwa kwedu kunovakwa pakuzvipira kukuru kugadzirisa uye kusangana nezvinodiwa zvega zvega zvevatengi vedu zvisinei kuti ndeve masangano akasiyana siyana, danho reDutch, kuwedzera mabhizinesi matsva kana vanhu vakazvimirira. Isu tinoedza kubatsira vatengi vedu munzira inobudirira kwazvo yekuzadzisa zvinangwa zvavo apa tichifunga nezvenzvimbo dzakaoma kunzwisisa dzepasi rose dzavanoshanda nekukudziridza bhizinesi ravo.
Vatengi vedu ndivo vari pakati pezvinhu zvese zvatinoita. Law & More saka yakazvipira zvizere kune hukuru sehwaro iko isu nekusimudzira zvachose kugona kwedu kwehunyanzvi nekutendeka. Kubva zvatatanga takazvipira kukwezva vane matarenda uye vakazvipira magweta uye varapi vemitero vanounza zvakanakira vatengi vedu, kugutsikana kwavo kuri pamberi pekuti tiri ani uye zvatinoita.
UBO kunyoresa muNetherlands muna 2020
Miraira yeEuropean inoda nyika dzenhengo kuti vagadzire UBO-rejista. UBO inomiririra Yekupedzisira Anobatsira Muridzi. Rejista yeUBO ichaiswa muNetherlands muna 2020. Izvi zvinosanganisira kuti kubvira 2020 zvichienda mberi, makambani nemasangano epamutemo anosungirwa kunyoresa varidzi vawo (in) vakananga. Chikamu che data rako re […]
Kutsiva kwezvinhu zvisiri-kukuvara kwezvinhu…
Chero kupihwa muripo wekusiri-kwezvinhu kukuvara kwakakonzerwa nerufu kana tsaona yaive kusvika munguva pfupi yapfuura isina kufukidzwa nemutemo weDutch mutemo. Uku kukuvara kusiri-kwezvinhu kune nhamo yehama dzepedyo izvo zvinokonzereswa nechiitiko cherufu kana tsaona yemudiwa wavo iyo imwe bato iri […]
Mutemo weDutch pamusoro pekuchengetedza kwezakavanzika zvekutengeserana
Vemabhizimusi vanoshandira vashandi, kazhinji vanogoverana zvakavanzika ruzivo nevashandi ava. Izvi zvinogona kunetsekana ruzivo rwehunyanzvi, senge nzira yekubheka kana algorithm, kana isiri-tekinoroji ruzivo, senge mabhesheni evatengi, nzira dzekutengesa kana zvirongwa zvebhizinesi. Zvisinei, chii chichaitika kune ruzivo urwu kana mushandi wako atanga kushanda kukambani ye […]
Nhoroondo, Netherlands yakagara iri simba rinotaridzika kugadzira iyo EU uye mabasa epasirese kubva, kuisa mari, kuvandudza uye kuita bhizinesi. Netherlands inoramba ichikwevera huwandu hukuru hwemakambani e tekinoroji uye anoshamisa emakambani akawanda pamwe ne "vagari venyika".
Our Corporate Mutengi kudzidzira kunotarisa kwakasiyana-siyana emakambani anoshanda kunze kwenyika akadai sekambani yeruzhinji uye yakazvimiririra yakabatanidzwa zvese muNetherlands uye kuyambuka.
The Private Clients tsika ye Law & More inotarisa pakubatsira kwevanhu uye mhuri dzepasi rose, idzo dzinoronga zviitiko zvebhizinesi ravo kuburikidza neDutch kutonga. Vatengi vedu vepasi rese vanobva munyika dzakasiyana uye dzakasiyana. Ivo vanobudirira mabhizimusi, anokwanisa kwazvo exats uye humwe hunhu ane zvido uye zvinhu munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Yedu Vatengi uye Vakazvimirira Vatengi vanogara vachigamuchira yakaenzana mhando yepamusoro yeyakagadzirirwa, yakazvitsaurira uye yakavanzika pamutemo masevhisi, akagadzirirwa kunyatsoitirwa kwavo chaiko zvinodiwa uye zvavanoda.
Partner / Mumiriri
Iwe unoda kuziva chii Law & More anogona kukuitira iwe semutemo femu muEindhoven uye Amsterdam?